सनराइज बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, तीनपटक सफ्टवेर परिवर्तन गर्दा १२ करोड बढी घोटाला !
ARCHIVE, BANKING, COVER STORY, SPECIAL » सनराइज बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, तीनपटक सफ्टवेर परिवर्तन गर्दा १२ करोड बढी घोटाला !
काठमाडौँ- सनराइज बैंकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ । बैंकले प्रयोग गर्ने सफ्टवेर ३ पटक भन्दा बढी परिवर्तन गरेर १२ करोड घोटाला भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि यस्तो खुलासा भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका केहि कर्मचारीको समेत संरक्षणमा यस्तो घोटाला भएको भन्दै सनराइज बैंकका सीईओ लगायत प्रोक्रुम्नेट विभागका केहि कर्मचारीलाईसमेत विपक्षी बनाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका केहि कर्मचारी नै यो खेलमा लागेकाले अख्तियारमा अनुसन्धानका लागि उजुरी गरिएको हो ।
३ पटकसम्म सफ्टवेर परिवर्तन
सनराइज बैंकले तीन पटकसम्म सफ्टवेर परिवर्तन गरिसकेको छ । बैंकको स्थापनाताका पुमोरी नामक सफ्टवेर प्रयोग गरेको बैंकले त्यसपछि टि २४ नामक सफ्टवेर प्रयोग गरेको छ भने हाल अर्कै सफ्टवेर फिनाकल प्रयोग गरेर १२ करोड भन्दा बढी घोटाला गरेको पाइएको छ । यसो त समय अनुसार सिष्टम वा सफ्टवेर परिवर्तन गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । तर यसरी बैंकले ३ पटकसम्म सफ्टवेर प्रयोग गरेको नियत भने गलत भएको बैंककै कर्मचारीहरु दावी गर्छन् । हाल हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुछ्रे बैंक लगायतका बैंकले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेर काम नलाग्ने भन्दै सनराइजले कमिसनकै लोभमा नयाँ सफ्टवेर प्रयोगमा ल्याएको बैंककै उच्च तहका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
अख्तियारमा पर्यो उजुरी
नीतिगत भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएको भन्दै बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्य, डेपुटी जेनेरल मेनेजर आशा राना, अपच कुमार यादव, र रोबिन नेपालसमेत उक्त प्रकरणमा सहभागी भएको भन्दै अख्तियारमा छानविनका लागि उजुरी गरिएको छ । सनराइज बैंकले सफ्टवेर कम्पनीसंगको मिलेमतोमा जनताको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै नीजहरुमाथि अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रिया आगाडी बढाउन भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोतको दावी छ । सनराइज बैंकले अन्य बैंकले प्रयोग गरेका सफ्टवेर विना कारण परिवर्तन गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसविषयमा छानविन गर्न आग्रह गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
किन दिनानुदिन विवादमा फस्दै छ सनराइज बैंक ?
यता सफ्टवेर घोटाला प्रकरणसम्म आइपुग्दा सनराइज बैंक एक पछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । यता सनराइज बैंकका संचालक समेत रहेका माल्चन दुगड फरार भएका छन् । म्याद नाघेको म्यांगो पल्प प्रयोग गरी गुणस्तरहीन फ्रुटी बनाउँदै गरेको गोप्य सुराकीका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा भदौ १२ गते सहायक प्रजिअ लुइँटेलले दलबलसहित सतुंगलस्थित दुगड फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडमा छापा मारेका थिए । प्रहरीले छापा मारेको दिनदेखि उनी फरार छन् । यता केहि समय अघि अदालतले दुइ बर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र बिगो समेत भराउने फैसला सुनाएपछी बैंकका चिफ मेनेजर अरुण पराजुलीसमेत विवादमा तानिएका थिए । नक्कली सरकारी छाप बनाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
बोल्नै मान्दैन बैंक
यसबारे बुझ्न हामीले सनराइज बैंकमा सम्पर्क गरेका थियौं । हामीले यसबारे सुचना अधिकारीलाई फोन ट्रान्सफर गराउन माग गर्दा फोन काटिने काम गरियो । बैंकको तल्लोस्तरको कर्मचारीले नै यस्तो गरेपछि बैंकमा यो प्रकरण कति तलसम्म थाहा छ भन्ने कुरालाई थप बल पुगेको छ । यस विषयमा हामीले सनराइज बैंकका सीईओ रत्नराज बज्राचार्यलाई सम्पर्क गर्न खोजेपनि उनी हाम्रो सम्पर्कमा आएनन् ।
कालोबजारीको अभियोगमा जेल जाकिने भएपछि सनराइज बैंकका संचालक फरार !